OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION: January 2010
BEFORE AND PRESENT KACHIN WARRIORS
မြန်မာနှိုင်ငံသည်နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုး၇ လက်မှ လွတ်လပ်ေ၇း၇ခဲ့သည်မှာ (၆၂)နှစ်သို့ေ၇ာက်ခဲ့ပြီ တကယ်ဘဲမြန်မာ ပြည်သူ ပြည်သား တိုင်း၇င်းသား အားလုံး စိတ်၏လွတ်လပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်၏လွတ်လပ် ခြင်းကို၇ရှိပါသလား?
အကယ်၍ပြည်သူပြည်သားတိုင်း၇င်းသားအများစုက လွတ်လပ်ေ၇း၏အနှစ် သာ၇ကို မခံစား၇ဖူး ဆို၇င် ဘယ်လိုလူတန်းစား(သို့ မဟုတ်) ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းက လွတ်လပ်ေ၇း၏ အ၇သာနှင့်တန်ဖိုးကို ခံစားကြ၇သနည်း?၊
ဤမေးခွန်းကိုဖြေဆို၇သော် - လွတ်လပ်ေ၇း၇ပြီးနောက် မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ခေါင်းဆောင်များ၏ လွဲမှားသောအယူအဆနှင့် တိုင်းပြည်ကိုညံ့ဖျင်းစွာအုပ်ချုပ်နေ ခြင်းကြောင့် မြန်မာနှိုင်ငံအတွင်းမှီတင်းနေထိုင်သူတဦးတယောက်မျှလွတ်လပ်ေ၇း၏အနှစ်သာ၇ကို မခံ စားကြ၇တော့ကြောင်း အောက်ဖေါ်ပြအချက်အလက်အချို့ အားကြည့်ခြင်းဖြင့်သိနှိုင်ပါသည်၊
၁) စစ်အစိုး၇နှင့်တိုင်း၇င်းသားတော်လှန်ေ၇းအင်အားစုများအကြား တပ်အင်အားဖြည့်တင်း ခြင်း၊ လက်နက်တပ်ဆင်ခြင်းတို့ ကိုယခင်ကထက်ပို၍လုပ်ဆောင်နေခြင်း။
၂) ပြည်တွင်းစစ်မချုပ်ငြိမ်းသည့်အပြင် ပိုဆိုးရွားသောပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်စေ၇န် စစ်အစိုး ၇မှဖန်တီးနေခြင်း။
၃) လွတ်လပ်ေ၇း၇ပြီးနောက်(၁၉၄၈-၂၀၁၀)အတွင်း ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်သေကြေခဲ့ပြီးသော မြန်မာနှိုင်ငံသားဦးေ၇ အားလုံးမှာ အနည်းဆုံး တစ်သန်းမှသုံးသန်းအထိ(၁၀၀၀၀၀၀-၃၀၀၀၀၀၀) ရှိနှိုင်ခြင်း၊
၄) တိုင်း၇င်းသားလူမျိုးစုများနှင့် စစ်အစိုး၇အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ယုံကြည်မှု ၁၉၆၂- ၂၀၁၀ အကြားလုံးဝပျက်ပြား သွားခြင်း။
၅) ဗမာတိုင်း၇င်းသားလူအများစုနှင့် စစ်အစိုး၇အကြား ၁၉၈၈ခုနှစ် ၈၊၈၊၈၈အေ၇းတော်ပုံ နောက်ပိုင်း အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားသွားခြင်းနှင့် တနေ့ တခြားတင်းမာမှုကြီးမားလာနေခြင်း။
၆) တိုင်း၇င်းသားများနှင့်ဆိုင်သောပြဿနာအခက်အခဲနှင့် နိုင်ငံေ၇းပြဿနာတို့ ကိုပြေလည် အောင်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်သော အ၇ည်အချင်း စစ်အစိုး၇၌ လုံးဝမရှိခြင်း။
၇) ယဉ်ကျေးသော၊ ဖေါ်ရွှေသော မြန်မာပြည်သားများအား ကြောက်ရွံ့ သော၊ ခိုးစားနှိုက်စား မှဝမ်းဝသည့် အနိမ့်ဆုံးယဉ်ကျေးမှု သို့ ဦးတည်နေစေသောအခြေအနေများ၊
၈) တကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံအတ်ာများများမှ စစ်ခေါင်းဆောင်များ၏ ခ၇ီးသွားလာေ၇း၊ ငွေကြေး စုဆောင်းထားရှိမှုတို့ အားကန့်သတ် ခြင်းနှင့်အခြားပိတ်ဆို့ မှုများ၊
၉) မြန်မာပြည်သူလူထု တ၇ပ်လုံး၏ ပညာေ၇း၊ကျန်းမာေ၇း၊စီးပွါးေ၇း၊လူမှုေ၇းအခြေအနေများ တနေ့ တခြားအနိမ့်ဆုံးအဆင့်သို့ေ၇ာက်ရှိလာနေခြင်း၊
၁၀) စစ်တပ်မှတိုင်း၇င်းသားဒေသများအတွင်း မဒိန်းကျင့်၊ လုယက်၊ သတ်ဖြတ် နေမှုတို့ ကို စနစ်တကျတိုး၍ပြုလုပ်လာနေခြင်း။
၁၁) ၁၉၄၈-၆၁ခုနှစ်အတွင်း တိုးတက်ဆဲနှိုင်ငံများထဲက အလားအလာအကောင်းဆုံးနှိုင်ငံ အဆင့်မှ ၁၉၆၂-၂၀၁၀ အတွင်း ကမ္ဘာ့အဆင်း၇ဲဆုံးသောနှိုင်ငံများအဆင့်သို့ေ၇ာက်ရှိနေခြင်း၊
၁၂)မြန်မာ့တပ်မတော်မှခေါင်းဆောင်များ၏မိုက်မဲစွာစနစ်တကျ စတင်အသုံးပြုခဲ့သော အဂတိ လိုက်စားမှုမှာ ပြည်သူများအကြား ပါပျံ့ နံ့ လာပြီး ယခုအခါ ကမ္ဘာ့အဂတိလိုက်စားမှုအဆိုးဆုံးနှိုင်ငံ အဆင့်သို့ေ၇ာက်ရှိနေခြင်း၊ စသည့် အချက်များအပြင် အထက် တွင် ဖေါ်ပြမထားသော အခြားမေ၇ တွက်နှိုင်သော အချက်အလက်များရှိနေသေးကြောင်း စာဖတ်သူအားလုံးသိရှိုပြီးဖြစ်မည်ဟု ယုံကြည် ပါသည်။
မြန်မာနှိုင်ငံရှိ တိုင်း၇င်းသားပြည်သူတ၇ပ်လုံးအတွက် လွပ်လပ်ေ၇းဟူသောအနှစ်သာ၇ ပျက်သုဉ်း ခဲ့သည်မှာ အနှစ်(၅၀) ခန့် ရှိပြီဖြစ်သည်၊ ထိုလွပ်လပ်ေ၇းပျက်သုဉ်းခဲ့၇သည် အဓိကအကြောင်း၇င်းမှာ- ၁၉၆၂ခုနှစ် စစ်အာဏာရှင်အစိုး၇မှ တိုင်းပြည်ကို လွဲမှားသောအယူအဆများဖြင့် ယုတ်ညံ့စွာအုပ်ချုပ် လာသည့်အချိန်မှအစပျိုးခဲ့သည်ကိုလည်းပြည်သူတ၇ပ်လုံးသိရှိပြီးဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် ထိုစစ်အာဏာရှင်စနစ်၏ခါးသီးသောအတွေ့ အကြုံများကိုနိဂုံးချုပ်စေ၇န် ၇ည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ၈၀%သော မြန်မာပြည်သားများ လမ်းပေါ်ထွက်မိမိ၏ဆန္ဒကိုဖေါ်ထုတ်ပြသည်ကို လျှစ်လျူရှုပြီး မဆလစစ်အာဏာရှင်စနစ်နေ၇ာတွင် ပိုဆိုးရွား သော န၀တစစ်ဘီလူးစနစ်ဖြင့် အစားထိုး ကာတိုင်းပြည်ကိုယုတ်ကန်းမိုက်မဲစွာဆက်လက်အုပ်ချုပ်နေပြန်သည်။
မြန်မာပြည်သည် တိုင်း၇င်းသားပေါင်းစုံရှေးပဝေသဏီမှ အတူနေထိုင်လာပြီး နယ်ချဲ့ ၇န်အမျိုးမျိုးကို မိမိမြေမှတိုက်ထုတ်ခဲ့သည့်သမိုင်းမှာအခြားမည်သည့်နိုင်ငံတို့ ၏သမိုင်းနှင့်မတူထူးခြားဂုဏ်ယူစ၇ာဖြစ် သည်၊ ထိုထက်မက ၁၈၁၉-၁၈၃၇ ခုနှစ် ဘကြီးတော်ဘု၇ားလက်ထက် ကချင်စစ်သည်များက စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလနှင့်အတူ အာသံပြည်သို့ စစ်ချီခဲ့ သည်ကို စာေ၇းဆ၇ာသိမ်းမောင်က ၁၂၉၃-ခု၊ပြာသိုလပြည့်ကျော် ၁၀-၇က်(၁၉၃၁ခုနှစ်)ေ၇းသော “မြန်မာသူ၇ဲကောင်းများ” အမည်ရှိ အထ္ထုပ္ပတ္တိကျမ်း စာမျက်နှာ(၆၂)၌ အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်ေ၇းသားထားသည် ကိုတွေ့ရှိ၇ပါသည်၊
မိုဃ်းကောင်းအထက်သို့ေ၇ာက်သောအခါ တောင်စားဗိုလ် နေမျိုးသိန်ပ၇ာဇာက - ကချင်သိန်းဖေါ လူတထောင်ကျော်နှင့် လိုက်ပါအမှုထမ်းလိုကြောင်း လျှောက်ထားလာသဖြင့် စစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးလျှင်ခွင့်ပြုလိုက်လေ၏။
စစ်သူကြီးမဟာဗန္ဓုလ၏မဏိပူ၇ အာသံတိုက်ပွဲ အကြောင်းကို အိန္ဒိယနိုင်ငံအာသံပြည်တွင်ယနေ့ တိုင် မှီတင်းနေထိုင်ကြသော ကချင်တိုင်း၇င်းသားများ(Singpho) အနေဖြင့်ဗမာအမျိုးသားသမိုင်းဆ၇ာများ ထက်မပိုတောင်ေ၇ာ့ပြီးသိကြမည်မဟုတ်ပါ။ အာသံပြည်တွင်ယခင်ကနာမည်ရှိခဲ့ကြသော NRU RAJA, PISA RAJA, U-RANG DUWA, DAHPA DUWA, DAIHPA DUWA, HPRUP DUWA စသော စစ်သူကြီးများ၏မျိုးဆက်များပြောပြသော သမိုင်းအချက်အလက်များအ၇ ဗမာတပ်များ “အ၀(AVA)” နေပြည်တော်မှ စစ်သည်အလုံးအ၇င်းဖြင့် အာသံပြည်သို့ စစ်ချီခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဌာနေတိုင်း၇င်းသား ဟူးကောင်း ဒူဝါများနှင့် အာသံပြည်၌နေထိုင်ခဲ့ကြသောကချင်တိုင်း၇င်းသားများ၏ အကူအညီဖြင့် စစ်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိ၇သည်၊ သို့သော်သမိုင်းတွင် ကချင်တိုင်း၇င်းသားများကို ချန်လှပ်ကာ “ငါဗမာကွ” ခံယူချက်ဖြင့် သမိုင်းကိုေ၇းသားခဲ့ကြောင်း ၀မ်းနဲစွာသိရှိ ၇ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဗမာဘု၇င်တို့အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံ၇သည့်ကချင်တိုင်း၇င်းသားများမှာ ၁၈၉၀-၁၉၂၉ခုနှစ် အမေ၇ိကန်သာသနာပြု ဆ၇ာ Dr. Ola Hanson ၏ကျေးဇူးဖြင့်သာစာပေယဉ်ကျေးမှုရှိသော လူမျိုး အဆင့်သို့ေ၇ာက်ရှိခဲ့ကြ၇သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်(၁၉၄၅) ဗမာအမျိုးသားတို့ (ဖဆပလ)၏ လွတ်လပ်ေ၇းလှုပ်ရှားမှုတို့ ကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့် နေသော နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုး၇က ကချင်တိုင်း၇င်းသားခေါင်းဆောင်များ ကို ဗမာအမျိုးသားများနှင့် လွတ်လပ်ေ၇းကြိုးပမ်းမှု မပြုလုပ်ကြ၇န်နှင့် ကချင်ဒေသကိုအင်္ဂလိပ်အစိုး၇ ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက် ဆက်လက်ထားရှိမှာဖြစ်ပြီး ကချင်လူမျိုးနှင့်ကချင်ဒေသ ကို(၁၀နှစ်) အတွင်း တိုးတက်ခောတ်မှီသော လက်အောက်ခံကိုလိုနီ အဖြစ်ထားရှိပေးမည်ဟူသော ဂတိက၀တ်များကို အကြိမ် ပေါင်းများစွာဖြင့် ပြောဆိုနားချခဲ့သော်လည်း ၁၇၂၀-၁၈၉၀ခုနှစ် အတွင်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သော အင်္ဂလိပ်-ကချင် တိုက်ပွဲများအတွင်း ၇ာ၊ ထောင် မကသောကချင်လူမျိုးများကို ၇က်၇က်စက်စက်သတ်ဖြတ်ခဲ့သောနယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုး၇များအား နာကျဉ်းမုန်းတီးမှု၊ မယုံကြည်မှုတို့ကတကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကချင်ခေါင်းဆောင်များကိုတလေးတစားဆက်ဆံမှု၊ သူ၏လုပ် ဆောင်ချက်များနှင့် ဂတိက၀တ်တို့ ကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့သော ကချင်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် အများစု အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ် အစိုး၇ထံမှ တောင်တန်းမြေပြန့် မခွဲခြားဘဲလွတ်လပ်ေ၇းတောင်းဆို၇န် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်၊(၁၉၅၈-၅၉ခုနှစ် ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး ဦးဝဘော် ဇော်၇စ် ကချင်ဘာသာဖြင့်ေ၇းသော “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ကျွန်ုပ် တွေ့ စဉ်က” စာအုပ်မှ အချက် အလက်အချို့ တင်ပြခြင်းဖြစ်သည်။)ထိုစဉ်က ကချင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် မဆလ၊ နအဖ နာမည် အမျိုးမျိုးတပ်ပြီး တိုင်း၇င်းသားပြည်သူများကို ယခုကဲ့သို့ ကျွန်ပြုအုပ်ချုပ် ခံ၇မည်ကို တင်ကြိုမှန်းဆ နိုင်ပါက ကချင်နှင့် အခြားတိုင်း၇င်းသားတို့ အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အင်မတန်ယုတ်ညံ့ကောက်ကျစ်စဉ်းလည်းပြီး အဆင့်အတန်း မရှိသောစစ်အာဏာရှင်များ၏ အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုခံ၇စ၇ာအကြောင်းမရှိနိုင်ပါ။
ကချင်အမျိုးသားတို့ ၏ ဗမာခေါင်းဆောင်များအပေါ်ယုံကြည်ကိုးစားမှုတို့ မှာမြန်မာနှိုင်ငံလွတ်လပ်ေ၇း ၇ပြီးနောက် ၁၉၄၉ခုနှစ်မှ စတင်၍ေ၇ာ့နည်းလာသည်သာမက ကချင်သေနတ်ကိုင် တပ်၇င်း(၁) မှ ဗိုလ်ကြီးလဖိုင်နော်ဆိုင်း ဦးဆောင်ပြီး ၁၉၄၉ခု ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလ၁၆-၇က် တွင်အသိအလင်းစတင် ပုန်ကန် ခဲ့ကြသည်။ ကချင်တိုင်း၇င်းသားခေါင်းဆောင် အားလုံး၏သဘောတူညီမှု မ၇ရှိ၍ ထိုပုန်ကန်မှုမှာ အောင်မြင်မှုမ၇ရှိသည်သာမက ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ကြီးလဖိုင်နော်ဆိုင်းကိုယ်တိုင်တရုပ်ပြည်သို့ နိုင်ငံေ၇း ခိုလုံမှုခံယူပြီး နောက်ပိုင်းဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်(ဗကပ)ပါတီ နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ကြောင်းသိရှိ၇သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်သော ဖဆပလခေါင်းဆောင်များနှင့် ကချင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်များ အကြားရှိခဲ့သော ဂတိ က၀တ်များအနက် အေ၇းကြီးသော အချက်များထဲမှ (၁) လွတ်လပ်ေ၇း၇ပြီး နောက် နှိုင်ငံတော်ကိုဖယ်ဒ၇ယ်ပြည်ထောင်စု စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်၇န် (၂) ကချင်ပြည်နယ်၏ နယ်နမိတ် သတ်မှတ်ပေး၇န် တို့ မှာ အလွန်ေ၇းကြီးသော အချက်များ ဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာ မြန်မာနှိုင်ငံတော်၏ လွတ်လပ်ေ၇းကျေညာသည့် ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါ၇ီလ-၄၇က်နေ့ မှ(၆)၇က်အကြာ ၁၉၄၈ ဇန္န၀ါ၇ီလ ၁၀၇က် နေ့ ကိုကချင်ပြည်နယ်နေ့ အဖြစ်ကမ္ဘာသိ ကျေငြာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာပြည်လွတ်လပ်ေ၇းမ၇ခင် ကချင်အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးများအနေဖြင့် ဖဆပလ၏ အတွင်းေ၇းပြဿနာများနှင့် နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်သည့်အ၇ည်အချင်းတို့ ကို လေးလေးနက်မစဉ်းစားဘဲ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုး၇ကိုမုန်းတီးသောစိတ်၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယုံကြည်သောစိတ် စသည့် ရိုးသားဖြူစင် သောစိတ်တို့ ဖြင့် လူများစုဗမာတိုင်း၇င်းသားများ နှင့်လွတ်လပ်ေ၇းကို၇ယူခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
သို့ သော် လွတ်လပ်ေ၇း၇ပြီးနောက် ဗမာအစိုး၇အနေဖြင့် ဖဆပလအတွင်း ၀ါဒေ၇း၇ာပြဿနာများ မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း၊ တိုင်းပြည်ကိုမနိုင်းမနင်းအုပ်ချုပ်နေခြင်းတို့ ကြောင့် တိုင်း၇င်းသားတို့ ၏မျှော်မှန်း ချက်တို့ ကိုဖြည့်ဆည်းပေး၇န် ဗမာအစိုး၇ မှအကြိမ်ကြိမ်ပျက်ကွက်ခဲ့သည်သာမက ၎င်းပြဿနာများကို လျှစ်လျူရှုနေခြင်းတို့ မှာ တိုင်း၇င်းသားလူမျိုးစုများ ပြည်မအစိုး၇ အပေါ် များစွာစိတ်ပျက်စေသည် သာမက ပြည်တွင်းစစ်ကြီးသို့ ဦးတည်လာစေခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုး၇ အနေဖြင့်ပြဿနာ၏ အဖြေမှန်ကို မဖြေရှင်းသည့်ပင်ဆက်လက်၍လျှစ်လျူရှုနေ သော် လည်းတိုင်း၇င်းသား လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်များ သဘောထားကြီးစွာ တိုင်းပြည်၏ပြဿနာမီး ကိုငြိမ်းစေ ၇န်၇ည်သန်ပြီး ၁၉၆၁ ခု၊ ဇွန်လ(၈)၇က်မှ (၁၆)၇က် အတွင်း ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း တောင်ကြီးမြို့ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ပြည်နယ်ပေါင်းစုံညီလာခံကြီး ကိုကျင်းပကာ မြန်မာနိုင်ငံ တိုင်း၇င်းသားလူမျိုးစု တိုင်းမှနိုင်ငံတော်အစိုး၇သို့ အကြံပြုတင်ပြခဲ့ကြသည်၊ ငြီလာခံ၌ဆွေးနွေး သောအချက်အလက် များမှာ “ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ညွန်ကြားချက်(၇)ချက်” အပေါ်အခြေခံ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်း အထောက်အထားများ အ၇သိရှိ၇သည်။ ဤညီလာခံကြီးတွင် ကချင်ပြည်မှ တိုင်း၇င်းသားကိုယ်စားလှယ် ဦးဇန်ထားဆင် မှ အောက်ပါအတိုင်းဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ ကြောင်းမှတ်တမ်းများအ၇သိရှိ၇သည် “ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာ ဆွေးနွေးတာကိုဘဲတချို့ ကဒါဟာနယ်ချဲ့ပယော၈ပါတယ် လို့စွပ်စွဲတာလဲရှိပါတယ်၊ ဒီမှာကျွန်တော်တို့ ကပြန်ပြောချင်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာလွတ်လပ်ေ၇း၇ရှိ ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ရှေးကနင့်ဘာမှမခြား ပါဘူး။” တဖန် “ဒီကနေ့ကချင်ပြည် နယ်မှာအမျိုးမျိုးပြောနေ ကြတယ်၊ ဒီနေ့ ညီလာခံမှာကြွေ၇ာက် လာတဲ့ ကချင်ကိုယ်စားလှယ် တွေ ကိုမေးကြည့်ပါ၊ ကချင်ပြည်မှာ သူပုန်လုံးဝမရှိပါဘူး၊ နောင်အခါမှာရှိမယ် မရှိမယ်တော့ မပြော နိုင်ပါဘူး။” ဟုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နိုင်ငံတော်အစိုး၇သို့ စေတနာဖြင့်တင်ပြ အသိပေးခဲ့ကြောင်း ကိုလည်း မှတ်တမ်းများအ၇သိရှိ ၇သည်။
နိုင်ငံတော်အစိုး၇အနေဖြင့် တိုင်း၇င်းသားများ၏ငြမ်းချမ်းစွာစေတနာအပြည့်ဖြင့်တင်ပြခဲ့မှုတို့ ကိုလုံးဝ လျှစ်လျူရှုဥပက္ခာပြုခဲ့သည်သာ မကဘဲ ၁၉၆၂ မတ်လ (၂)၇က်တွင် နေ၀င်းစစ်အစိုး၇သို့ နိုင်ငံတော် အာဏာကိုလွဲပြောင်းပေးသည့်ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် တိုင်းပြည် ၏ပြဿနာကို ပို၍ရှုပ်ထွေးသောအခြေအနေ သို့ တွန်းပို့ လိုက်၇ာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းစစ်မီးဟုန်းကနဲတောက်လောက် လာစေခဲ့သည်၊ ထိုနစ် ၁၉၆၂ ဖေဖေါ်ဝါ၇ီလ(၅)၇က်နေ့ ကချင်တိုင်း၇င်းသားများလည်း လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ေ၇းကိုအသိ အလင်း စတင်ဆင်နွဲလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကချင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် သမိုင်းမှတ်တမ်းများအ၇ မင်းနိုင်ငံထူထောင်ခဲ့ကြသော လူမျိုးစုကြီးများ ကဲ့သို့ မဟုတ်ဘဲ ကျယ်ဝန်းသောတောင်းတန်းဒေသအတွင်းစော်ဘွား၊ဒူဝါကြီးများအုပ်ချုပ်သော စနစ်မှ ဆင်းသက်လာသောမျိုးနွယ်စုဖြစ်သည့် အားလျှော်စွာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လွတ်လပ်သော ပြည်နယ်နှင့် ကိုယ့်မျိုးနွယ်စုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကို ကိုယ်တိုင်ဖန်တီး ဆုံးဖြတ်ခွင့်ရှိသော၇ပိုင်ခွင့်သာ နိုင်ငံ တော်မှအာမခံနိုင်ပါက တော်လှန်၇န်အကြောင်းမရှိသလို ခွဲထွက်နိုင်ငံထူထောင်၇န်လည်း အကြောင်း မရှိပါ၊
ကချင်အပါအ၀င် မြန်မာနှိုင်ငံရှိ တိုင်း၇င်းသားများယခုကြုံတွေ့ နေသောအခြေအနေမှန်မှာ- တိုင်း၇င်း သားများကိုယ်တိုင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၇န်အခက်အခဲမျိုးစုံနှင့်စိမ်ခေါ်မှုအများအပြားရှိလာနေသော စာပေယဉ်ကျေးမှုတို့ ကို စစ်အစိုး၇ ကိုယ်တိုင်မလေးစားသည်သာမက စနစ်တကျဖျက်ဆီးဖြောက်ဖျက် နေမှုတို့ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်း၇င်းသားတို့ ၏ ရှိတည်နေမှု ကိုပင်ခြမ်းခြောက်လာနေသော အခြေ အနေသည် လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ အဖြစ်ဆက်လက် တည်ရှိ၇န် ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ် ပါ၊ ဗမာစစ်အစိုး၇၏ တိုင်း၇င်းသားများအပေါ်မိုက်မဲစွာ ထိမ်းချုပ်နေသောအချက်အများအပြား ရှိသည့် အနက်အသေးဆုံးအမှားတခုဥပမာပြော၇၇င်- သတင်းစာနယ်ဇင်းများ၊ ရုံးသုံးစာများတွင်ကချင်လူမျိုး လူနာမည်ေ၇းသား ဖေါ်ပြ၇ာတွင်များသောအားဖြင့် မောင်လှဂျာ၊ ဦးလှဂျာ ဟူ၍သာဖေါ်ပြေ၇းသားပြီး ကချင်လူမျိုးတို့ ၏အိမ်ထောင်စုမျိုးရိုးနာမည် ကိုအသိအမှတ်ပြုေ၇းသားဖေါ်ပြခြင်းမရှိသည်မှာ နှစ်ပေါင်း များစွာကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်၊ တကယ်ဆို ဦးမ၇န် လှဂျာ၊ မောင် လဖိုင် လဂျာ ဟုသာေ၇းသားဖေါ်ပြ သင့်ပါသည်၊ ကချင်လူမျိုးတို့ သည် ဗမာလူမျိုးမဟုတ်ပါ၊ မယားပါသားလည်း မဟုတ်ကြပါ၊ တိုင်းတပါး နယ်ချဲ့ တို့ ၏လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ေ၇းကိုသဘောတူညီစွာ၇ယူခဲ့ကြသော တိုင်း၇င်းသားအချင်း ချင်းဖြစ်ကြသည့် အတိုင်း တဦးနှင့်တဦး မတူညီသောယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံများကို အသိအမှတ်ပြု အပြန်အလှန်လေးစားကြခြင်းဖြင့်သာ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗမာမင်းနိုင်ငံခောတ်မှ ကချင်အမျိုးသားများနှင့်ဆက်ဆံခဲ့သော ဗမာလူမျိုးများအနေဖြင့် ကချင်လူမျိုး အချင်းချင်းကြား လူမှုေ၇း ဆက်ဆံခြင်း၊ စာေ၇းဆက်သွယ်ကြခြင်းများ ကိုနားမလည်ဘဲ ၂၁-၁၁-၂၀၀၉ ၇က်နေ့ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင် NDAK နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ဗိုလ်ယိန်းနန် ဆိုသူက KIA တပ်မှ သူငယ်ချင်းဘ၇န်ရှောင်ဆိုသူသို့ ဗထူးတပ်မြို့ မှေ၇းလိုက်သော စာကြောင့် ကချင်အများစုမှာ တော် တော်လေးစိတ်ပျက်ခဲ့ကြသည်၊ ကချင်လိုဟန်ဆောင်ပြီးဝါဒဖြန့် လိုလျှင် ကချင်တို့ ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အချင်းချင်းစာေ၇းသည့်အခါထားသည့်သဘောထားများကိုသိဖို့ လိုပါသည်၊ ထိုစာမှာ ကချင်လူထု အတွင်းဝါဒဖြန့် စာ ဖြစ်မလာဘဲ ၇ီစ၇ာ စက်ဆုတ်ဖွယ်စာ တစ်စောင်အဖြစ်သာရှိခဲ့သည်ကို ထိုစာေ၇း သူသိမည်မဟုတ်ပါ။
တဖန် ၂၀၀၉ခု၊ နိုဝင်ဘာလ ၂၆-၂၈ အတွင်း ကချင်ပြည်နယ်၊ဗန်းမော်မြို့ ၊၂-မိုင် အောင်သာတွင် ကချင်ရိုး၇ာကောက်သစ် စားပွဲနှင့် မနောပွဲတော်ကျင်းပ၇န် စီစဉ်ထားသော မနောကွင်းကိုမြေလှန် ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ပွဲတော်ပြီးဆုံးသည့်အချိန်၌ မနောတိုင် များကိုဖြိုဖျက်ခိုင်းခြင်းတို့ မှာ ကချင်အမျိုးသား များကို စစ်ကျေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊ ဘိုးဘေးဘီဘင်လက်ထက်မှ ဆင်းသက်ခဲ့ သောရိုး၇ာ ယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းမှတ်တမ်းများအ၇ မနောပွဲကျင်းပ၇န် စီစဉ်ထားသော မြေနေ၇ာကို မည်သူတဦး တယောက်မျှ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ကျူးကျော်နှောက်ယှက်ခြင်းမပြုလုပ်၇ပါ၊ ယုတ်အစွဆုံး ညနေပိုင်း နေ၀င် ချိန်မှစ၍ မနောကွင်းအတွင်းမည်သည့် လူပု၈္ဂိုလ်မျှ ၀င်ထွက်သွား လာခြင်း မပြုကြ၇တော့ပါ၊ ကချင် အမျိုးသားတို့ယခင်နတ်စား(ရိုး၇ာ) သည့်ကာလတွင် နေ၀င် သည့် အချိန်မှနောက်တမနက် နေထွက် လာသည့်အချိန်တိုင် နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တို့ အတွက်သတ်မှတ် ထားသောအချိန်အဖြစ် သိရှိ၇ပြီး မနောကွင်းကိုဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်သူမှန်သမျှ ကချင်အမျိုးသား များ၏၇န်သူအဖြစ်ကျေညာလိုက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုမနောကွင်းကိုဖျက်ဆီးသူ(သို့ ) ဖျက်ဆီး၇န် ညွှန်ကြားသူ များ၏မိသားစု ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အားလုံးလည်း အသေဆိုးဖြင့် သေကြ၇သည်သာမက အကုသိုလ်များကိုခံစားကြ၇ ကြောင်းရိုး၇ာမှတ်တမ်းများအ၇သိရှိ၇သည်၊ တဖန် ယခင်ရိုး၇ာဥပဒေများအ၇ မနောတိုင်များကို စိုက်ထူပြီးသည့်နောက် တစ်နှစ်(၁၂လ) အတွင်း မနုတ်၇၊ မဖျက်ဆီး၇ပါ၊ အကယ်၍ မနောတိုင်စိုက် ထူပြီးနောက် ထိုဒေသအတွင်း တဦးတယောက်သေဆုံးခဲ့လျင်တောင်မှ မြေကိုတူးဆွပြီး မြုပ်နှံသြ၈ိုလ် ခြင်းမလုပ်ကြ၇ပါ၊ အထက်ပါရိုး၇ာ ဥပဒေများကိုမလိုက်နှာဘဲ မနောတိုင်များကို ဖျက်ဆီးခြင်း၊ နုတ်ခြင်းအမှုကိုကျူးလွန်သူ(သို့ ) စီစဉ်ဆောင်ရွက် သူမှန်သမျှ ကပ်ကြီးလေးပါးနှင့် ၇င်ဆိုင်ကြ၇ ကြောင်းသမိုင်းအထောက်အထားများအ၇သိရှိ၇သည်၊ ကချင်တို့ ၏အမြင့်ဆုံး ရိုး၇ာဖြစ် သည့် မနော ပွဲတော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့သော အစိုး၇ဟူ၍ ယခုလက်ရှိနိုင်ငံကိုမတ၇ားအုပ်ချုပ်နေသည့် စစ်အစိုး၇မှတပါး အခြားမည်သည့် အစိုး၇မျှ မရှိခဲ့ပါ၊ မဆလ၊ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်အစိုး၇၊ ဖက်စစ်ဂျပန် အစိုး၇တို့ ပင် လေးစား ခံခဲ့၇သော အမြင့်ဆုံးရိုး၇ာအဖြစ်ရှိခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအ၇သိရှိ၇ ပါသည်။ ကချင် တို့ ၏အမြင့်ဆုံးရိုး၇ာကိုဖျက်ဆီးခဲ့သော ဤစစ်အစိုး၇အပေါ်မည်သို့ သောကပ်ဆိုးကြီး များမည်သို့ကျေ၇ာက်လာမည်ကို မသိရှိ၇သော်လည်း မေ၇တွက်နိုင်သော ပြဿနာပေါင်းစုံနှင့် ယခုပင်စတင် ၇င်ဆိုင်နေကြ၇ပြီဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ ရှိ၇သည်။
စစ်အစိုး၇အနေဖြင့် ကချင်လူမျိုးတို့ ၏ရိုး၇ာမနောတိုင်နှင့် မနောကွင်းတို့ အားဖျက်ဆီးနေခြင်း၏ စိတ်၇င်း သဘောထားအမှန် မှာ- ဗန်းမော်မြို့ ၌ကချင်တို့ ၏ရိုး၇ာအထိမ်းအမှတ်ကျောက်တိုင်များ သမိုင်း အဆက်ဆက်တည်ရှိသွားမည်ကိုကြောက်ရွံ့ သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ၀ါ၇င့်ကချင်နိုင်ငံေ၇း သုတေတီ များ၏ထင်မြင်ချက်များအ၇သိရှိ၇သည်၊
သမိုင်းအထောက်အထားများအ၇ ဗန်းမော်မြို့ သည် ရှမ်းအမျိုးသားများ၏ သမိုင်း၌ထင်ရှားခဲ့သော Kingdom of Pong အတွင်းတည်ရှိခဲ့သောမြို့ ဖြစ်ကြောင်းမှတ်သား၇သည်၊ တဖန် ၁၈၇၁ခုနှစ် Dr. John Andersonေ၇းသားထားသော A REPORT ON THE EXPEDITION TO WESTERN YUNAN စာအုပ်စာမျက်နှာ၂၁၆ ၌ဖေါ်ပြထားသောဗန်းမော်မြို့ ဆိုသည်မှာ-
Bhamo, situated in latitude 24ံ16’ North, longitude 96ံ47’ East, onahigh prominence on the left bank of the Irawady, about two miles below the mouth of the Tapeng River, isanarrow town one mile in length. There are four gates, one at either end, and two on the eastern side, and all are closed immediately after sunset. A guard is stationed at each of the two extreme ones; and four or five outlooks in the form of thatched huts, perched at intervals on the top of the stockade, are called into requisition when an attack is expected from the dreaded Kakhyens(Kachins). It contains about 500 houses, and allowing five persons to each, the population may be estimated at 2,500 persons, and it may be referred to two portions, one Chinese and the other Shan.
ထိုအချိန်က ဗန်းမော်မြို့ တွင်ဗမာကုန်သည်အချို့ နှင့် ဗမာဝန်တဦးနေထိုင်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပြီး အများစုမှာ ရှမ်းနှင့်တရုပ် လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်း၊ Kakhyens(Kachins)ကျေးရွာများမှာ ဗန်းမော်မြို့အားဝန်း၇ံထားကြောင်း ထိုစာအုပ်တွင်ဖေါ် ပြပါရှိသည်။
ဗန်းမော်မြို့ နှင့်ပါတ်သက်၍တခါ လွတ်လပ်ေ၇းမ၇ခင် ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ကချင်အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်များ ၏သဘောတူညီချက်အ၇ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဗန်းမော်မြို့ ပါဝင်ေ၇း၌ ထိုစဉ်က ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း ၂၆.၀% ခန့် နေထိုင်သော ဗမာအမျိုးသား လူနည်းစု၏ကန့် ကွက်နေမှုကြောင့် ကချင်ပြည်နယ် နယ်နမိတ်သတ်မှတ်ေ၇းလုပ်ငန်းကြန့် ကြာနေခြင်းကို ဖဆပလခေါင်းဆောင် များစိတ် ပျက်ခဲ့ကြသလို ကချင်ခေါင်းဆောင်များကလည်းအတော်စိတ်ရှည်ခဲ့၇ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများ အ၇သိရှိ၇သည်၊ အကယ်၍ဗန်းမော်မြို့ သည် ကချင်ပြည်နယ်နမိတ်အတွင်းသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါက ကချင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် လူများစုဗမာလူမျိုးများနှင့် အင်္ဂလိပ်အစိုး၇ထံမှလွတ်လပ်ေ၇း အတူ၇ယူ စ၇ာအကြောင်းလည်း လုံးဝ မရှိကြောင်းသိရှိ၇သည်။
၁၉၄၇ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော FRONTIER AREAS COMMITTEE OF ENQUIRY 1947 REPORT, PART I စာအုပ်၌ ဗန်းမော်ခရိုင်၏ လူမျိုးစုလိုက် လူဦးေ၇စာ၇င်းကိုလည်းအောက်ပါ အတိုင်းသိရှိနိုင်သည်၊
Area …. …. 4,148 sq. miles
Total Population …. 129,000
Part I Population …. 52,000
Part II Population …. 77.000
Kachin …. …. 49,794 or 38.6%
Shan …. …. 36,765 or 28.5%
Burma Group …. …. 33,540 or 26.0%
Indian, Chinese and others … 8,901 or 6.9%
အထက်၌ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း သမိုင်းတလျှောက် ကချင်ဒေသတွင်းရှမ်းအမျိုးသားများ မြို့ ရွာတည် ထောင်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြသလို မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နေ၇ာအနံ့ ကချင်လူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းများအ၇သိရှိ၇သည်၊ အထက်ဖေါ်ပြပြီး ခဲ့သော FRONTIER AREAS COMMITTEE OF ENQUIRY 1947 REPORT, PART I စာအုပ်တွင် မြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်ရှိ လူဦးေ၇စာ၇င်း ကိုလူမျိုးစုအလိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖေါ်ပြထားသည်။
Area … … 21,400 sq. miles
Federated States … … 690,000
Unfederated Wa States … 82,614
Shan and Lolo Moso … … 333,960 or 44%
Palaung. Wa … … 220,000 or 28%
Indians, Chinese and others … 93,840 or 12%
Kachins … … 71,070 or 9%
Burma Group … … 53,130 or 7%
ဗန်းမော်မြို့ နှင့်ပါတ်သက်၍ ကချင်အမျိုးသားများနှင့် ဆက်နွယ်မှုတို့ ကိုတင်ပြ၇လျှင် စာမျက်နှာ ထောင်ချီ၍တင်ပြလည်းပြီး နိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ လို၇င်းကိုတင်ပြ၇သော်- နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့အထက် ဗမာပြည်ကို ကျူးကျော်ဝင်ေ၇ာက် သိမ်းပိုက်စဉ် အခါကသော်၎င်း၊ တဖန်ဖက်စစ်ဂျပန်များဝင်ေ၇ာက် လာသောအချိန်တွင်သော်၎င်း ဗန်းမော်အ၇ပ်၌ ကချင်ဒူဝါကြီးများနှင့် စစ်သည်အမြောက်အများ အသက်သွေးပေါင်းမြောက်များစွာပေးလှူကာကွယ်ခဲ့ကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်း များမှသိရှိ၇သည်။
၁၈၉၈ခုနှစ်တွင် ကချင်အမျိုးသားတပ်ခွဲမှူး အူး၈ျစ်လ(Ujik La) ဦးစီးပြီး ကချင်အမျိုးသားများသာ ပါဝင်သော စစ်ပုလိပ်(Military Police) တပ်ခွဲ(အင်အား ၁၂၀ခန့် ) ဗန်းမော်မြို့ ၏လုံခြုံေ၇းတာဝန် ကိုစတင်ယူစဉ်ကာလက ဗန်းမော်မြို့ ၌ ကချင်အိမ်ထောင်စုတော်တော်များများရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိ ၇သည်။ (A BURMESE ARCADY BY MAJOR C. M. ENRIQUEZ-1923) စာအုပ်မှကိုးကားသည်။
အထက်၌ဖေါ်ပြခဲ့သော ကချင်စစ်ပုလိပ်(Kachin Military Police) တပ်ခွဲသည် ၁၉၁၆ခုနစ်မှ First Regular Kachin Army သို့ ပြောင်းလည်းဖွဲ့ စည်းလိုက်ပြီး၊ ၁၉၁၇ခုနှစ် ဂျူလိုင်လ-၃၀၇က်နေ့ တွင် ပထမကမ္ဘာစစ်(WW I) ကာလ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ်တို့ ၏ရှေ့ တန်းစစ်မျက်နှာတခု ဖြစ်သော Mesopotamia(ယခုအခေါ်-အီ၇တ်နိုင်ငံ) သို့ စေလွတ်ခြင်းခံ၇ပြီး ထိုစစ်ပွဲ၌ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ တံဆိပ် အများအပြား၇ရှိသည် သာမက ကချင်သွေးနီကြောင်း ကမ္ဘာကိုပြသခွင့်၇သော အေ၇းကြီး သည့် သမိုင်းဝင်အထောက်အထားတ၇ပ်အဖြစ် မှတ်သားထားသင့်ကြောင်း သိရှိ၇သည်။
ဗန်းမော်မြို့ နှင့်ပါသက်၍ ဖေါ်ပြနေ၇ခြင်းမှာ ဗန်းမော်မြို့ ၌ဘိုးဘေးဘီဘင်လက်ထက်မှ နေထိုင်ခဲ့ကြ သောကချင်အမျိုးသားများ မိမိတို့ ၏ရိုး၇ာယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီး၊ ပိတ်ပင်နေသော စစ်အစိုး ၇တို့လက်နက်အားကိုးအနိုင်ကျင့်စော်ကားခံနေ၇သော ကြောင့်ဖြစ်သည်၊ ဗန်းမော်မြို့ သည် ကချင်ပြည် နယ်ရှိမြို့ တမြို့ ဖြစ်ပြီး ဗန်းမော်မြို့ တွင်မှီတင်းနေထိုင်သော တိုင်း၇င်းသားတို၏ မြို့ သာဖြစ်သင့် သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ- ရှမ်း၊ ဗမာလူမျိုးများအတွက် ဗန်းမော်မြို့ အေ၇းကြီးသလို ကချင်အမျိုးသားများ အတွက် လည်းအထက်ဖေါ်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း အေ၇းကြီးသည့်သမိုင်းဝင်မြို့ တမြို့ ဖြစ်ကြောင်းအထင် အရှားတွေ့ ရှိ၇ပါသည်။
ကချင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် လက်နက်အားကိုးမိုက်ရိုင်းသောစစ်အစိုး၇မှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် များမရှိသော ကချင်ကျေးရွာများ၌ စေတီပုထိုးများ တည်ဆောက် နေခြင်းများမြင်တွေ့နေသော်လည်း ယဉ်ကျေးပြီးသောကချင်များ အကြောင်းမဲ့ဖျက်ဆီး ကြမည်မဟုတ်ပါ။
တခါတလေစဉ်းစားကြည့်တယ် နေ၀င်းလက်ထက်ကတည်းက တပ်မှူးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒီ မောင်အေးနဲ့သန်းရွှေ ရူးများရူးနေ ကြပြီးလား? ဒါမှမဟုတ် Psychopath တွေများလား? အမျိုးမျိုးစဉ်းစားကြည့် တယ် ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အများကြီးက အဲဒီလမ်းစဉ်ဘဲလျှောက်နေကြတာ နေ၀င်းလက်ထက်ကတည်း ကဆိုတော့ တခုခုတော့လွဲနေပြီဆိုတာသေချာနေပြီ၊
ကချင်ပြည်နယ်ထဲက တိုင်း၇င်းသားအားလုံး ဂျန္န၀ါ၇ီလ(၁၀)၇က်နေ့ကချင်ပြည်နယ်နေ့ ကို အမြင့် မြတ်ဆုံး ရိုး၇ာနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပဖို့ မြှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်၊ ပွဲတော်၇က်နားကပ်လာချိန်မှာတော့ ပွဲတော်ကို စစ်အစိုး၇၇ဲ့ စိတ်ကြိုက် အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်၊ နယ်ချဲ့ အင်္ဂလိပ် နဲ့ဖက်စစ် ဂျပန်အစိုး၇တောင် လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခံ၇တဲ့ မနောပွဲတော်ဟာ ယုတ်ညံ့တဲ့စစ်အစိုး၇၇ဲ့ စော်ကားခြင်း ကိုနောက်တကြိမ် မြစ်ကြီးနားမြို့ မှာထပ်ပြီးခံ၇တာပါဘဲ၊ ဒီအပြုအမူဟာ ကချင်လူမျိုးထု အားလုံးကို စော်ကားလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အနယ်နယ်အ၇ပ်၇ပ်မှ ကချင်ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြောပြချက်အ၇ သိရှိ၇သည်၊ ကချင်နာမည်ကိုပင် မှန်အောင်မခေါ်နိုင်သော ဗမာစစ်ဘီလူးများ ပြုလုပ်ပေးမှ ပွဲဖြစ် မည့်ကချင်အမျိုးသားတို့ ၏ အမြင့်မြတ်ဆုံး ရိုး၇ာ၏ အနာဂတ်သည်လည်း ကချင်အမျိုးသားများကို လမ်းဆုံလမ်းခွသို့ ပို့ ပေးနေသောအချက်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိ၇ပါသည်။ ရိုး၇ာမနောပွဲတော်ကျင်းပေ၇းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအ၇ ကချင်အမျိုးသားများ၏ပါဝင်မှုကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ ရှိ၇ မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃၀ ၇က်နေ့၁၃၁၅ နာ၇ီအချိန်တွင် စီတာပူ၇ပ်ကွက်၊ မနောကွင်း အတွင်းရှိ မနောအိမ်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော (၆၂)နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့အခမ်းအနား နှင့် ရိုး၇ာမနောပွဲတော် အခမ်းအနား ကျင်းပေ၇း ညှိနှိုင်းအစညိးအဝေးအစည်းအဝေးတက်ေ၇ာက်လာသူများအောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များတက်ေ၇ာက်ကြပါသည်-
(က) ဗိုလ်မှူးကြီး တင်မောင်ဝင်း တိုင်းဦးစီး
(ခ) ဗိုလ်မှူးကြီး မြတ်ကျော် စစ်ဗျူဟာမှူး
(ဂ) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး သက်ပုံ စစ်ဦးစီးမှူး(ပထမတန်း)
(င) ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ၇ဲထွဋ် တပ်၇င်းမှူး၊ အမှတ်(၂၆၀)
(ဃ) ဗိုလ်မှူး တင်ဇော်ဦး ယာယီတပ်၇င်းမှူး၊ အမှတ်(၂၁)
(စ) ဗိုလ်မှူး ၇ဲမင်းအောင် ယာယီတပ်၇င်းမှူး၊ အမှတ်(၅၈)
(ဆ) ဒုတိယ၇ဲမှူးကြီး မြင့်အောင် မြစ်ကြီးနားခရိုင်၇ဲတပ်ဖွဲ့ မှူး
(ဇ) ဦးသိန်းထွန်းဦး မြစ်ကြီးနားခရိုင် လ၀က
(ဈ) ဦးဝင်းမော် ဦးစီးအ၇ာရှိ၊ အေးချမ်းသာယာေ၇းနှင့်ဖွံ့ ဖြိုးေ၇းကောင်စီ
(ည) ဒေါ်ကြည်ကြည်နှောင်း ဒုတိယဦးစီး၊ ပြန်ကြားေ၇း
(ဋ) ဦးဇုန်းတိန့်ပွဲတော်နယက
(ဋ္ဌ) ဦးလဖိုင်ဂွန်ဂျာ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ေ၇း
(ဍ) ဦးဖေါ်လားဂမ်ဖန် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ေ၇း
(ဎ) ဗိုလ်ကြီး စိုးပိုင် တပ်စုမှူး၊ လုံခြုံေ၇း
(ဏ) ဗိုလ်ကြီး စည်သူ မှတ်တမ်းတင်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အကြေင်းအ၇ာတို့ သည် ကချင်လူမျိုးများ နေ့ စဉ်တွေ့ ကြုံခံစားနေ၇သော စစ်အစိုး ၇၏ လက်နက်အားကိုး အနိုင်ကျင့်စော်ကားခံနေ၇သောအချက်များ မပါဝင်ဘဲ ၂၀၀၉ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ လမှ ၂၀၁၀ ဂျန္န၀ါ၇ီလအထိ(၃)လအတွင်း ဗန်းမော်မြို့ နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ တို့ တွင်ကျင်းပခဲ့သည် ကချင်ရိုး၇ာ မနောပွဲတော်နှင့်ပါတ်သက်ပြီး တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Overseas Kachin Association နှင့် ကချင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် မိမိခေါင်းပေါ်သို့ ကျလာသည့် သစ်ရွက်ခြောက် ကိုပင် ဖမ်းဆီးထောင်ချ၇န် ၀န်မလေးသော န၀တဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ စိတ်ကြိုက်စီစဉ် ထားသော ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိသည်သာမက အသိအမှတ်လည်းလုံးဝမပြုပါကြောင်းတင်ပြလိုက်၇ပါသည်။ ။
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:38 PM No comments:
OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION STATEMENT
OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION’s Statement on SPDC demands on the Kachin Independence Army and other ethnic nationality ceasefire armies
The New Light of Myanmar or Myanmar Ahlin, the official news organ of the military government of Burma/Myanmar, has offered daily editorials since September 12, 2009, specifically intended to intimidate and threaten Kachin and other ethnic national armies that stand opposed to its ruthless rule and policies.
The following statement is issued by the Overseas Kachin Association in response to constant and unmitigated provocation by the SPDC:
I. If the SPDC wishes to holdagenuinely successful national election in 2010, it must first genuinely correct its own performance in the following areas:
A. The SPDC must sincerely ask forgiveness from the citizens of the nation for its excessively violent and oppressive behavior, which has been exponentially worse than the worst moments the country experienced asaBritish colony.
B. The SPDC must confess guilt to the murder of at least 8500 innocent Kachin civilians, since 1962,* and pay their families or next of kin fair and equitable reparation as penalty for the crimes.
C. The SPDC must assume full responsibility for the wanton burning, looting and total obliteration of at least 1800 rural Kachin villages since 1962, and sincerely ask for forgiveness for these atrocities from, and make remedial payments to, the innocent surviving victims.
D. The SPDC must beg for forgiveness and pay equitable reparation to those Kachin women who have been brutally raped and violently treated, or their families; there are at least 1200 recorded such instances.
E. The SPDC must immediately stop the massive resettlement of more than hundreds of thousands of Burmans, since 1962, from lower Burma to Kachin State, by providing subsidies and other inducements.
F. Since 1962, Kachin people have been inhibited via intimidation, and prohibited by regulation from observing their traditional culture and customs. Kachins are not allowed to teach our native language. As an additional example, our sacred manau ritual fields have been used to celebrate the Burmese water festival which is secular and often characterized by unrestrained licentiousness.
G. The SPDC must immediately stop the military government’s intention and practice of excluding Kachins from participating in Kachin State government by seriously curtailing the opportunity and the frequent arbitrary dismissal of Kachins who are in state government service.
H. The SPDC must immediately remove all restrictions and barriers imposed since 1962, upon use and teaching of native language and literature programs of the ethnic nationalities.
II. If the Burman military government wants to see the KIA turn intoaBorder Guard Force(BGF) type of organization, then it must first implement the following.
A. The SPDC must withdraw all its troops and command posts from Kachin State.
B. The SPDC must stop immediately the negating and ignoring of ethnic nationality rights; heretofore, repeated reminders of this issue have fallen on deaf ears. This issue must be the priority of any talks henceforth.
C. The core purpose of the SPDC government’s desire for detente with the KIA is to advance its own agenda; the SPDC’s agenda does not include any consideration of the Kachins’ agenda which the KIA has advocated and defended these many years. The military government has resorted to bribery, intimidation and divide-and-rule tactics against leaders in the Kachin opposition. We demand that the SPDC government face up to the fact that its own agenda is entirely self-serving and that it contradicts the wishes of the citizens of the country. The SPDC government must immediately begin amending its thinking, behavior, attitude, philosophy and course of action.
D. Any agreement for detente should entail the SPDC’s complete withdrawing of troops, reduction of zones of control, and ceasing intimidation of civilians through displays of military power.
We demand that these above mentioned and other egregious behaviors and actions stop immediately.
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 3:36 PM No comments:
OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION - WUNPAWNG NSEN
JINGHPAW MUNGDAW MASAT LADU HKRUM MANAU 2010
Wunpawng amyu sha ni hpang de ndau dat ai
Jinghpaw Mungdaw, Munghpawm Myen Mung, ngu nna 10 January 1948 hta masat tawn sai re. Tim, 1962 kaw nna dai ni du hkra, mungdan masa hpe Myen hpyen hpung gaw, ntsa nna dip ga-up tawn, shagyeng shakyet ai hku uphkang ai hpe hkam sha ra saga ai. Shaning 2010 Mungdaw masat ladu hkrum aten du yang, anhte amyu yawng hpe jutegawt matsut bang tawn sai, ngu ai hpe mu lu nga ai.
Hpyen masa hte ga-up dip sha hkrum ai aten hta, amyu masa lam gaw, adaw achyen ahkyep alep ayai aya rai mat wa sai; nga sat nga sa lam, amyu masa lam hte daidaw ahkaw ahkang ni hpe n tat kau mayu, marit la ga tim, gam maka gaw, anhteahkrun lam hta hkrang langai sha, n-gun atsam langai sha, n rai mat sai. Mung shawa hte rawt malan hpyen hpungalapranemung, ya aten hta, n myit mada n byin shangun mayu tim, rau mazum lu ai lam nau n nga mat wa ai majaw, lapranemanam zawn zawn, masha katsing shada zawn zawn nga nna myit hta shang wa mahka rai wa nga ai.
Jinghpaw Mungdaw masat 62 lang ladu hkum ai manau poi hpe Myitkyinaegalaw mahka rai sai. Anhteahtung labau hta manau poi e, buga jut magup de nna du sa ai makyin jinghku ni shada da kabu gara myit pyaw let hkrum zup jawm manau lu ai aten re. Dip ga-up zingri zingrat hkrum ai prat hta ndai zawn shada myiman madun hkat nna, amyu langai sha, myit mang maren, amyu lam hta grim grim lagaw lahkam htawt sa wa na rai ga ai, ngu ai lailen n nga mat wa sai. Ndai hpe ya aten hta sharai la ga, lailen madun ga law, ngu lajin dat ai.
2010 Mungdaw manau de KIA Shanglawt Hpyen Hpung gaw, hpyen hking hte hkrem sa du manau lawm na re. Amyu shawa ni e, anhte hpe dip ga-up ai ni mu nan mu mada lu hkra, anhteahpyen hpung malawm ni hpe kabu aw-law let hkap bawp hkalum la ga. Anhte kabu myit rawt ai nsen gaw, lamu ganghkau ting hta hpungtang garu mat wa hkra rai u ga. Anhte shada hkap hkalum la hkat ai majaw anhte hpe dip gamyet ai niamyit hta hkra mat wa hkra, n hkrit n tsang, n gamyin, n lanyan ai sha, Wunpawng amyu shawa gaw, tinang amyuaRawt Malan hpyen ma ni hpe tsaw ra madi shadaw nga ai, ngu ai hpe madun dan ai lailen shapraw ga, ngu shadut lajin ndau dat ai.
OKAamalai, Sara Kaba Dr. Maran La Raw
Posted by OVERSEAS KACHIN ASSOCIATION at 5:06 PM No comments:
KIA presents Kachin State day with arms
The Kachin Post / January 07, 2010
Military authorities from Burma Army’s northern command loosen its prior restriction on Kachin Independence Army with arms to present the Manau festival which marked the 62nd anniversary of Kachin State day.
A KIA officer , who is in condition of anonymity, told The Kachin Post that KIA leaders today decided to participate the Manau festival in Myitkyina, afterarequest from Lt-Col Thet Pone of Burma Army northern command and Manau festival committee. KIA previously cancelled to attend the Kachin State day festival due to the restrictions of attending equipped KIA personnel at the festival.
Kachin State day is celebrated on January 10th of almost every year after Kachin Independence Organization,apolitical wing of KIA, and Burma Army signedaceasefire agreement in 1994. KIA and its personnel used to present Kachin State day festival with fully equipped arms and uniform, dancing amass in Manau park in Myitkyina.
Kachin observers believe that Burmese junta tries to test the water of KIA political stance on Border Guard Force proposal as well as attempts to gain public dissent against KIA by using public event.
Kachin Independence Army is the one of the largest revolutionary army in Burma. The organization wage decades-long war against the successive Burmese government until it reached ceasefire accord with Burma Army in 1994. The organization’s originally mission is to gain independence Kachin Land, the area encompassed Kachin State in Burma.
The Kachin State was established on January 10, 1948,asix days after Burma gained independence from British.